Lapel pini Factory - China Lapel pini vagadziri uye vanotengesa
Aya mabheji emhangura akatsikirirwa akazadzwa neKutevedzera Enamell, Idzi tsika mapepa emipini ane mavara akajeka uye ane mhando yakanaka, yakasimudzwa uye yakagadziriswa simbi inotsanangurwa., Hapana epoxy kupfeka inodiwa,. Uku kugadzirwa kwehunyanzvi kunenge kwasimudza simbi mutsetse, uyo une yakasimba kwazvo yakasimba simbi yekuumbwa.
Dhijitari Dhinda lapel pini
Aya epamusoro emhando yepamusoro echinyakare eAmerica mapepa tinogona kugamuchira tsika dhizaini, kana iwe uine yako dhizaini ingotitumira yako yedhijitari art faira, isu tinoteedzera yako dhizaini dhizaini mune yemhando yepamusoro lapel pini uye ugozvipa kwauri kwauri nenguva! iripo, isu tichava nechokwadi chemhando yezvigadzirwa pamwe neyakagadzirwa lead nguva.
Chii chinonzi kupenya?
Wedzera musanganiswa wekupenya kwemavara uye enamel kune kuzorora kwepini yako kana mari, wozoipfekedza ne epoxy dome kuchengetedza pamusoro uye kuwedzera yakajeka sheen.
Kunyangwe muchireveso chidiki chechiedza kupenya, uye wedzera mamwe marambi kune dhizaini iwe watove kupenya. Ichi chinhu chinofanirwa-kuve nechimwe chechikoro chekutengeserana mapini!
Paunenge uri pamakonzati, mubhawa kana munzvimbo ine rima, wakamboona kupenya kwechiedza pane mumwe munhu here? ichi chinhu chakakurumbira kwazvo chemafashoni mumakore achangopfuura - mapepa emapeni.
Iyo yerima enamel kupenya kweyedu tsika pini yakakwana kana iwe uchida kuti pini yako ibude pachena muchaunga kana murima
Kana iwe wakatarisa mukugadzira yako enamel pini, iwe pamwe wakaona mazwi "akaoma enamel" uye "akapfava enamel". Vanhu vazhinji vane iwo mubvunzo mumwe chete: Ndeupi musiyano? Musiyano mukuru pakati peakaomarara uye akapfava enamel ndiwo akapedzwa magadzirirwo. Akaoma enamel pini dzakatsetseka uye dzakatsetseka, uye akapfava enamel pini dzakasimudza simbi micheto. Maitiro ese ari maviri anoshandisa yakafanana simbi kuumbwa, uye ese ari maviri achave neakajeka uye ane hupenyu mavara. Asi pane zvekare dzimwe sarudzo dzakasarudzika dzakasarudzika kune nyoro enamel
Hinged Lapel pini
Slide inofamba mapini ndeimwe yematanho akasarudzika emapini, akashongedzerwa nezvidiki hinged hanzi izvo zvinokutendera iwe kuvhura nyore uye kuvhara mapini. Kana uine mamwe marogo, zvinyorwa uye masirogani anogona kuratidzwa pamapini, ichi ndicho chikumbiro chakanakisa nekuti pane mativi matatu anogona kushandiswa kuendesa meseji. Kunyangwe iri riri basa rakareruka kana pfungwa, kufamba kwakatsetseka uye kwakatsetseka kunoda hunyanzvi hune ruzivo, isu takasarudzika mukugadzira mapelini mapini. Izvi zvinotevera zvimwe zvakajairika l ...
Mwenje we LED unogona kuiswa paPCB pane zinc alloy kana isina simbi lapel pini, uye zvinowirirwa kumusana zvinogona kuve batira butterfly kana magineti.
Pemberera yako yakasarudzika yezororo gore rino neino inopenya mwaka chimiro bheji kubva kuGlowProducts.com.
mufananidzo wakaiswa pinis
Nei Mapikicha Akatemwa Pini? Ndiyo sarudzo yakanakisa yekugadzira mapikicha akacheketwa mapini kana iwe uchida asingaremi mapepa mapepa ane ruzivo rwakajeka. Zvakasiyana nezvipenga zveCloisonne, izvo zvakaumbwa, pikicha yakatemerwa Lapel Pins inoratidzira dhizaini yakananga mukati mesimbi pamusoro pasina ridge uye mupata kuumbwa. Izvi zvinowedzera huwandu hwezvinhu izvo dhizaini inogona kuratidza. Isu tinotanga kushandisa komputa-inodzorwa yemhando yepamusoro michina kunamira simbi hwaro hwako dhizaini. Isu tinobva tazadza muvara wesarudzo yako uye tinopisa ...
Kusiyana neinofa inorova, 3D die-cast lapel pin panyama inoratidza mucherechedzo wechiratidzo pane chisina chinhu (chidimbu chesimbi chakatsetseka), nepo 3D die-cast lapel pini inogadzirwa nekudururira simbi yakanyungudika pakumanikidza kukuru kuita pre-yakagadzirwa dhizaini yekuumba